ပီလောပီနံကိတ်/Cassava Cake | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← ပြည်ပလာတာ/Pyay Paratha
ကိုရီယားရေညှိသုတ်/ Korea seaweed salad →
အဲဒီမုန့်ကို မိတ်ဆွေတယောက်အိမ်မှာစားဖူးတာပါ။ တခါမေး လုပ်ကြည့်မဖြစ်၊ နောက်တခေါက်ထပ်မေးတဲ့အခါ လန်ဒန်အလည်ရောက်နေတဲ့အဖေက မအေတူသမီး မဟုတ်လိုက်တာ။ သမီးအမေဆို အစားအသောက် ကိုမြည်းကြည့်တာနဲ့ ဘာတွေပါလဲ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဖြစ်မလဲ သိတယ် တဲ့။ အမေ့ကိုဘယ်လိုမှ ယှဉ်လို့မရမှန်သိပေမဲ့ အဖေမကမခံချင်အောင်ပြောလိုက်တဲ့ဒဏ်ကိုတော်တော်မခံနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပီလောပီနံထုပ်သွားထပ်ဝယ်တော့ ဆိုင်ကဖိလစ်ပိုင်လူမျိုး အိသက်သားတွေသမီးတွေကသူတို့ Cartoonဇာတ်ကောင်Oso နဲ့တူလို့သူ့ကို Oso လို့နံမည်ပေးထားတယ်။ အဲဒီ Oso ကဘာလို့ဒီဟာကို တနေ့တည်း ခဏခဏလာဝယ်တာတုံးမေးတော့မှမုန့်လုပ်တာမဖြစ်လို့ဆိုတော့ သူကဒီနည်းလေးပေးပါတယ်။ လုပ်ရတာလွယ်ပြီး စားလို့ လဲကောင်းပါတယ်။ ကြိုက်လို့ ခဏခဏစားဖြစ်တာလေးပါ။
-ပီလောပီနံ 450 ဂရမ် ၂ထုပ်/ Grated Cassava
-ဆား ဇွန်း၁ဝက်( အချိုပွဲဇွန်း)
-နွားနို့ ဆန်ချင်ခွက် ၁ခွက်
ပီလောပီနံ ခြစ်ပီသားများနဲ့နို့ဆီ ကိုဗူးရဲ့ သုံးပုံ နှစ်ပုံထဲ့ ကြက်ဥ နှစ်လုံးထဲ့ -နွားနို့ထဲ့ ဆား ထဲ့ အုန်းနို့ကို တဗူးကျော်ထဲ့ ( အုန်းနို့နဲ့နို့ဆီချန်ခိုင်းတာနောက်ပြန်သုံးမှာမို့ပါ)။ အထက်ပါများကို သမအောင်ရောမွှေပြီး ထောပတ်သုတ်ထားသောမုန့်ဖုတ်မဲ့ပန်းကန်ထဲ ထဲ့ပြီး ၁၈၀ ဒီဂရီ နဲ့ ၃၅ မိနစ် အပေါ်မီး အောက်မီးနဲ့ဖုတ်ပါ။
ပြီးရင် Oven ထဲကပြန်ထုတ်ကာ ခုဏကကျန်သော အုန်းနို့နဲ့နို့ဆီကို ရောကာမုန့်သားပေါ်ဖြန့်ခင်းပေးပါ။ Oven ထဲ ပြန်ထဲ့ပြီးအပေါ်မီး ၁၅၀ နဲ့ ၁၀မိနစ်ခန့်ထားပေးရင်ရပါပြီ။
အအေးခံပြီးအနံ့မွှေးပြီ စိမ့်နေသော ပီလောပီနံမုန့်လေးလှီးစိတ်စားလို့ရပါပြီ။
I have eaten this cake at one of my friends house. As I loved it I asked forarecipe and tried to make it but it did not pan out well. On my second ask forarecipe, my Dad was here in London foravisit reminded me that my Mum would know how to make it if she tastes it. I know that I can’t compete with my Mum over this matter, but as he got on my nerves on my indomitable spirit, I set out to buyaCassava inanearby Philippine groceries shop. In that shop, there is guy as he looks alike Oso, the cartoon character, so we simply nick name him Oso. He asked me why do I keep coming back to buy the same stuff again in one day, so I explained that I was in my attempts to makeacassava cake. By hearing my explanations, he then gave me this wonderful recipe. It is very easy to do and tasty as well that I often make it.
-2 450g sacks of grated cassava
-1 tin of condensed milk
-1 and half tins of coconut cream
– 1 tea cup of milk
-halfatea spoon of salt
Inabuttered brush tray, thoroughly mix up all grated cassava, 2/3 of condensed milk, 1 tea cup of milk ,2 eggs, salt and just overatin of coconut cream (Condensed milk and coconut cream are leftabit to use in later) then put the tray into the oven for 35 minutes with heat from top and bottom with 180 C.
Then, take it out from the oven, and cover it with the rest of condensed milk and coconut cream and put it back to oven for 10 minutes with 150 C.
Let it cool down, then cut and enjoy this very rich and lovely fragrance Cassava Cake.
5 comments on “ပီလောပီနံကိတ်/Cassava Cake”
08/06/2013 @ 10:53 am
အိသက်ေ၇ ညီမနည်းအတိုင်းလုပ်စားတာအဆင်ပြေတယ်။ ကျေဇ။းနော်
11/06/2013 @ 5:13 pm
HOTE wann thar par taeama yae 🙂
Pan Ei Khaing
12/09/2013 @ 1:47 pm
ပီလောပီနံဥကိုကောENGLISH လိုဘယ်လိုခေါ်လဲ ပြောပြပေးနိုင်မလားရှင့်
13/09/2013 @ 10:52 pm
23/04/2015 @ 2:31 am
I really lov ur cassava cake and rice cake (mote sane paung) recipe and thank u for sharing it on fb in publish.it seem easy to be done for even ordinary house wife like me.
LeaveaReply to Pan Ei Khaing Cancel reply